Telecom cabinet kutonhora
AC Air conditioner yeTelecom
DC air conditioner yeTelecom
Peltier TEC unit yeTelecom
Heat exchanger yeTelecom
Thermosiphon Heat Exchanger yeTelecom
Combo kutonhora kweTelecom
kunze Integrated cabinet
Air Conditoner (kunze kwemaindasitiri cabinet)
Simba rekuchengetedza system kutonhora
Monoblock Air Conditioenr yeBESS
Monoblock mvura inotonhorera unit yeBESS
Pamusoro akaiswa air conditioner yeBESS
Motokari powered firiji
Data center kutonhora
Vadivelu Comedy Telecom Cooling
Magadzirirwo emamiriro ekunze eBESS
Heat exchanger yeTelecom ...
SpaceShields® yakatevedzana chaiyo air conditioners inopa yakachengeteka, yakavimbika, simba-inoshanda, zvakatipoteredza uye chaiyo kutonhora mhinduro kune yakakura uye yepakati-saizi komputa kamuri uye inopa yakakwana nharaunda inosanganisira tembiricha, hunyoro uye hutsanana, nezvimwe kumidziyo uye simbisa kugadzikana. kushanda kwemidziyo ye365days * 24hours.
RowShields® yakatevedzana InRow air conditioner iri pedyo nekutonhodza maseva makabati. Inopa yakachengeteka, yakavimbika, yakakwira inoshanda uye yakasvibira yemamiriro ekunze kutonhora mhinduro kune modularized yakakwira yemafuta density data centre yetembiricha, hunyoro uye hutsanana kudzora masevhisi.
BlackShields yekunze yakasanganiswa kabati yakagadzirirwa nharembozha yakagoverwa base chiteshi, iyo inogona kusangana nechikumbiro chekunze kwekutaurirana nharaunda uye kuisirwa. Simba rekushandisa, bhatiri, tambo yekugovera tambo (ODF), tembiricha yekudzora tembiricha (Air conditioner / Heat exchanger) inogona kubatanidzwa mukhabhineti kusangana nechikumbiro chemutengi sechitoro chekumira.
Vehicle powered unit for Transport firiji
BlackSheilds VcoolingShields akatevedzana mafiriji mayuniti akagadzirwa seyemamiriro ekunze ekugadzirisa mhinduro dzeinotonhora cheni zvinhu. Iwo mayunitsi akaiswa zvakachengeteka uye akavimbika kune Heavy / yepakati / light refrigeration mota dzekufambisa dzine maficha emhando yepamusoro, kuvimbika kwepamusoro, diki diki, kutonhora nekukurumidza etc.
BlackShields EC yakatevedzana yepamusoro yakasungirirwa air conditioner yakagadzirirwa seyekugadzirisa mamiriro ekunze mhinduro yebhatiri simba rekuchengetedza system (BESS). Tichifunga nezvechikumbiro chekudzora kupisa kwebhatiri uye chimiro chechigadziro chekuchengetedza simba, mhepo inogadzirisa inogadzirwa seyakavimbika uye inobudirira yekugadzirisa mamiriro ekunze ekugadzirisa nepamusoro akaiswa chimiro, kuyerera kwemhepo huru uye kugovera kwemhepo kubva kumusoro kwemudziyo.
BlackShields MC yakatevedzana liquid kutonhora unit imvura inotonhorera iyo yakagadzirirwa kudzora mamiriro ekunze ebhatiri simba rekuchengetedza system. Iine mono-block dhizaini, compact dhizaini, yepamusoro yekubuda, padhuze nekupisa sosi, yakakwira chaiyo kupisa vhoriyamu, yakaderera ruzha uye nekukurumidza kupindura, iyo yemvura inotonhorera unit inogona kuita yakanyanya kushanda uye yakavimbika kutonhora mhinduro yeBESS.
BlackShields EC yakatevedzana monoblock air conditioner yakagadzirirwa seyakagadziriswa yemamiriro ekunze mhinduro yesimba rekuchengetedza sisitimu. Tichifunga nezvechikumbiro chekudzora kupisa kwebhatiri uye chimiro chesimba rekuchengetedza simba, iyo air conditioner inogadzirwa seyakavimbika uye inobudirira yemamiriro ekunze ekugadzirisa mhinduro ine monoblock chimiro, yakakura kuyerera kwemhepo uye pamusoro pemhepo.
AC air conditoner yekunze kwemaindasitiri kabati
BlackShields AC-P yakatevedzana Air conditioner yakagadzirirwa kudzora mamiriro ekunze emagetsi grid kabati uye pekugara munzvimbo dzakaoma dzemukati nekunze. Nekuyerera kwemhepo yakakura uye kureba kwekupihwa kwemhepo, inogadzirisa zvinobudirira dambudziko rekupisa nekunyorova kwemukati / yekunze kabati uye ndiyo yakanaka sarudzo ye telecom application.
AC air conditioner yemukati meindasitiri kabati
BlackShields AC-L yakatevedzana Air conditioner iindasitiri yekutonhodza mhinduro iyo yakaiswa padivi peiyo yakakwirira uye nhete kabati ine isina kuenzana uye yakatwasuka kugovera kwekupisa kwenzvimbo munzvimbo dzinonetsa dzemukati. Inonyatsogadzirisa kupisa uye kuisa dambudziko rekabhineti yakasiyana.
BlackShields HC yakatevedzana Combo Air conditioner yakagadzirwa senzira yekuchengetedza simba yekudzora mamiriro ekunze ekhabhineti munzvimbo dzakanetsa dzemukati nekunze. Yakabatanidzwa AC Air conditioner ine DC Thermosiphon Heat exchanger, inogadzirisa zvinobudirira dambudziko rekupisa remukati / yekunze kabati uye kuwana yakanyanya kunaka simba.
BlackShields HM yakatevedzana DC Thermosiphon Heat exchanger yakagadzirirwa kudzora mamiriro ekunze emukati / ekunze kabati mune inonetsa yemukati nekunze nharaunda. Iyo inongoita yekutonhodza sisitimu inoshandisa iyo phase-shifting simba kutonhora mukati mekabati. Inonyatsogadzirisa dambudziko rekupisa rekunze kabati uye rinoshandiswa zvakanyanya mukati memukati nekunze makabati uye enclosures ine inonzwisisika midziyo yemagetsi.
Iyi unit inoshandisa zvizere zvisikwa mukati uye kunze kwekushisa kusiyana. Iyo tembiricha yemukati yakavharirwa inotonhodzwa kuburikidza nekushandiswa kunoshanda kwefiriji evaporation. The passive kupisa kuchinjanisa kwakavakirwa pachisikigo convection, iyo inotenderera mvura iri vertical yakavharwa loop wedunhu pasina zvinoda yakajairika pombi kana compressor.
Heat exchanger yeTelecom cabinet
BlackShields HE yakatevedzana Heat exchanger yakagadzirwa seyangomira kutonhora mhinduro yekudzora mamiriro ekunze emukati / ekunze kabati munzvimbo dzakanetsa dzemukati nekunze. Inoshandisa tembiricha yekunze yemhepo, inoichinjanisa mune yakakwira inoshanda counter flow recuperator uye nekudaro inotonhodza mweya wemukati mukati mekhabhineti ichigadzira yemukati, yakatonhodzwa yakavharwa loop. Inonyatsogadzirisa dambudziko rekupisa rekunze kabati uye rinoshandiswa zvakanyanya mukati memukati nekunze makabati uye enclosures ine inonzwisisika midziyo yemagetsi.
© Copyright - 2009-2021 : Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd. All Rights Reserved.